My Tamagotchi Forever Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ထာဝစဉ်အကြှနျုပျ၏ Tamagotchi
ထာဝစဉ်အကြှနျုပျ၏ Tamagotchi APK ကို
သင့်ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင် Tamagotchi ဇာတ်ကောင်မြှင့် နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်သင်၏ Adventures share! သင့်ရဲ့ Tamagotchi ဇာတ်ကောင်ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေဖို့ရန်သင့်နေ့စဉ်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်နေပါသည်။ ကောင်းစွာကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်လျှော်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ⚽🏀, ထို့နောက်ပိုပြီးပျော်စရာအဘို့မြို့မှာရှိတဲ့တခြား Tamagotchi သူငယ်ချင်းများကိုဖြည့်ဆည်း။ ဒါပေမယ့်အိပ်ရာရန်သင့်ဇာတ်ကောင်ထားရန်မမေ့မလြော့ပါ! 🌛
Tamatown Explore အတွက် အပြည့်အဝ AR (လုပ်ခဲ့ပြီး Reality) 👀, သင့်ဝှက်ထားမိတ်ဆွေများကိုရှာဖွေပထမဦးဆုံးအစဉ်အဆက် AR-enabled Tamagotchi ဂိမ်း၌ဘဏ်ဍာနှင့်ဆုကြေးငွေစုဆောင်း!
သင့်ကိုယ်ပိုင် Tamatown Customize ပစ္စည်းများနှင့်အတူသငျသညျထို့နောက်ပေါ်မှာနေရာချခြင်း, ဖွင့်ဝှက် play & ရှာပါစေရန်သင့်အားလှည့်ပတ်နေတဲ့ကောင်းတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုရှာဖွေ, အများဆုံးကြိုက်နှစ်သက်! ချုံများနှင့်ပင်အတွင်းမှအဆောက်အဦးများအတွင်း, ထောင့်လှည့်ပတ်ပုန်းက၎င်း၏မိတ်ဆွေများကရှာမြို့တဝိုက်ကသင်၏အကျင့်စရိုက်ကိုလမ်းပြ။ လာမယ့်အဆင့်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့မရရှိနိုင်ကာလ၌ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုရှာပါ။ ဒင်္ဂါးပြားနှင့်သင့်ရမှတ်နှင့်အချိန်တိုးမြှင့်ဖို့မြို့ပတ်ပတ်လည်အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားဆုကြေးငွေပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းပါ။ ရှာဖွေရေးစတင်ကြပါစို့
ဒါဟာအနောက်ပထမဦးဆုံး Tamagotchi စာလုံးပေါင်းအောက်တွင်ကျဆင်းသွားပြီးကတည်းက 20 နှစ်ပေါင်းခဲ့ပါတယ်။
💕 သင့်ရဲ့ Tamagotchi ကောင်းဂရုစိုက်ပါ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့သူတို့ကိုကြီးထွား watch! mini ကိုဂိမ်း Play, မိတ်ဆွေများဖြစ်စေလျက်, Tamatown စူးစမ်းခြင်းနှင့် Company နှင့်သင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေချင်ပါလိမ့်မယ်အမှတ်ရစရာအခိုက်အဘို့မြို့သူ့ဟာသူစိတ်ကြိုက်။ သူတို့ကြီးထွားသကဲ့သို့သငျပေးသည့်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်သင်ပြုသောအရာတို့ကိုပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့ကွဲပြားခြားနားသော Tamagotchi ဇာတ်ကောင်သို့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်။ အခါသင့်ရဲ့သူတို့လူအပေါငျးတို့ထကျစိုက်ပျိုးကြသည် ဒါကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်, Rockstar သို့မဟုတ်စုံထောက်ဖြစ်, သူတို့ကိုအကောင်းဆုံးကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ကူညီ!
⭐ မြှင့် သင့်ရဲ့ Tamagotchi ဇာတ်ကောင်: သငျသညျအစာကျွေးသေချာအောင်လျှော်ကအပြီးကို clean up နှင့်ပျော်ရွှင်ကျန်းမာနေဖို့ကောင်းတစ်ဦးညဥ့်အိပ်စက်မှုများအတွက်အလင်းအိမ်ထွက်လှည့်။
⭐ ပျော်ရွှင်ပါစေ သင့်ရဲ့ Tamagotchi ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူ: mini ကိုဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်လမ်းတစ်လျှောက်ကတခြား Tamagotchi ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအောင်အတူတကွ Tamatown စူးစမ်း။
⭐ အတွေ့အကြုံ AR သင့်ရဲ့တကယ်ပတ်ဝန်းကျင်၌သင်တို့၏ Tamagotchi သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဂိမ်းဝှက် & ရှာပါးကစားခြင်းအားဖြင့်!
⭐ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲ သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အဂရုစိုက်ဘယ်လိုပေါ် မူတည်. တဦးတည်းအမျိုးအစားမှအခြားရန်သင့် Tamagotchi အက္ခရာများ။ သငျသညျကိုသူတို့လာမယ့်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့သူကိုသိဘယ်တော့မှ!
⭐ စုစည်းရရှိ အမှတ်ရစရာအခိုက်အသင်၏အ Tamagotchi ဇာတ်ကောင်နှင့်ဖော်ရွေမြို့နိုင်ငံသားများနှင့်အတူ shared ။
⭐ SHARE သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးအချိန်လေး။
⭐ စုရုံး mini ကိုဂိမ်းများနှင့် Level-Up ကစားခြင်းအားဖြင့်ဒင်္ဂါးပြား!
⭐>သော့ဖွင့် အရသာအစားအစာ, ချစ်စရာဝတ်စုံနှင့် Tamatown အလှဆင်ဖို့ရောင်စုံပစ္စည်းများ။
⭐ နှိုင်းယှဉ် သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်သင်၏တိုးတက်မှုနှင့် Tamagotchi-မွေးမြူရေးကျွမ်းကျင်မှု။
⭐ ကလိခြင်း သင့်ရဲ့ Tamagotchi ဇာတ်ကောင် - သူတို့ကချစ်ကြ!
- သင်ကစားပွဲထဲမှာတိုးကိုကူညီမယ့်နည်းလမ်းသစ် Daily သတင်းစာရည်မှန်းချက်များမိတ်ဆက်ခြင်း! အပိုဆုဆုလာဘ်အဘို့ထိုသူတို့အားလုံးဖြည့်စွက်!
- သင့်ရဲ့ Facebook သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါနှင့်သူတို့၏က high-ရမှတ်ရိုက်နှက်!
- ပို bug တွေ fixed ခဲ့ကြသည်
138.86 ကို MB
BANDAI NAMCO Entertainment ကဥရောပ